Budata uTorrent maka Windows
Free Budata maka Windows (2.29 MB)
uTorrent guzo dị ka onye dị elu iyi ahịa ebe ị nwere ike ibudata iyi nefu na kọmputa gị. Otu nime sọftụwia kachasị ewu ewu netiti ndị ahịa Bittorrent, a na-ahọrọ uTorrent nihi na ọ bụ oghe oghe.
Na ya mfe na-eji mfe interface, obere file size, mfe echichi na ndị ọzọ na elu atụmatụ, software na-anọchi netiti ọtụtụ iyi mmemme na ahịa bụ doro anya na ndị kasị eji iyi Downloader na ụwa.
Na uTorrent, nke na-enye gị ohere ibudata ọtụtụ iyi faịlụ notu oge, ị nwere ike ịhazi oke bandwidth ịchọrọ iji maka nbudata gị site na ịhazi njikọ ịntanetị gị ka ịchọrọ. Nụzọ dị otu a, ịnwere ike ịga nihu na-agagharị nInternetntanet mgbe ị na-ebudata iyi.
Usoro nbudata iyi, nke nwere mmechi akpaka, nbudata ndokwa, nyocha iyi, nlekota noge nbudata, ndozi bandwidth na nchekwa dị elu, na-ejikwa ihe onwunwe kọmputa gị na ọkwa kachasị elu. Ya mere, kọmputa gị anaghị akpata nsụgharị ọ bụla ma ọ bụ daa mgbe a na-ebudata faịlụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ onye ahịa Bittorrent dị elu na nke dị elu iji budata faịlụ na ndọtị ndọtị, ị nwere ike ịmalite iji uTorrent site na nbudata ya na kọmputa gị necheghị echiche.
Etu esi agbalite uTorrent?
The ọnụ ọgụgụ nke isi mmalite, WiFi nnyonye anya, uTorrent version, njikọ gị ọsọ na mkpa ntọala emetụta iyi faịlụ download ọsọ. Yabụ, kedu ka esi agba ọsọ? esi ebudata iyi ngwa ngwa Lee ndị isi mkpa ka ị ntị ka mee ngwangwa uTorrent na ibudata iyi faịlụ ngwa ngwa;
Lelee ọnụ ọgụgụ nke iyi iyi: A na-eji isi mmalite maka ndị na-aga nihu ịkekọrịta faịlụ ahụ mgbe ebudatara ya. Ihe ndi ozo, ngwa karie nbudata. Gbalịa ibudata iyi faịlụ site na tracker na ọtụtụ isi mmalite dị ka o kwere.
Jikọọ kọmputa gị na modem / router kama na njikọ WiFi: Ọtụtụ akara nụlọ nwere ike igbochi njikọ netwọk gị; nke a ga-emetụta uTorrent download ọsọ yana internet ọsọ.
Lelee ntọala uTorrent kwụ ọtọ: faịlụ ọ bụla ị budatara na uTorrent na-eji ntakịrị bandwit. Mgbe ebudatara ọtụtụ faịlụ na ọsọ ọsọ kachasị elu, oge nbudata nke faịlụ dị ogologo. Gbalịa ibudata faịlụ otu otu. Nokpuru Nhọrọ - Mmasị - kwụ nahịrị Ntọala setịpụrụ ọnụọgụ kachasị nke nbudata na-arụ ọrụ na 1. Ọzọkwa mee ka esemokwu nke ọdụ ụgbọ mmiri uPnP. Nke a ga - agba mbọ hụ na uTorrent anaghị arapara na firewall gị ma jikọọ na akụrụngwa. Can nwere ike ịnweta ọnọdụ dị mkpa nokpuru Nhọrọ - Mmasị - Njikọ.
Dị njikere ị na-eji ụdị ọhụụ kachasị nke uTorrent: Lelee mmelite mgbe niile. Nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na nsụgharị ọhụrụ dị maka nbudata nokpuru Enyemaka - Lelee maka mmelite.
Add more trackers: Inwe ihe onwunwe nke tracker ga budata dịkwuo iyi download ọsọ.
Gbanwee ọsọ ọsọ: Tinye 0 dị ka Oke (Kachasị Elu) nbudata ọsọ ọsọ ị ga-ahụ mgbe ịpịrị na nbudata ahụ. Ọ ga-ewe oge maka ọsọ nbudata ịbawanye, mana a ga-enwe mmụba na nbudata ọsọ ọsọ iji tụnyere nke gara aga.
Gbaa mbọ hụ na ebute ụzọ ụzọ ụzọ: Pịa Ctrl Alt Del ma ọ bụ Ctrl + Shift Esc iji mepee Task Manager wee pịa Malite. Chọta uTorrent nokpuru Usoro ma pịa aka nri na ya ma gaa Nkọwa - Mee Mkpa - High.
Lelee ntọala ndị dị elu: Nke mbụ, nokpuru Nhọrọ - Mmasị - Di elu - Cache Disk, lelee igbe Na-akpaghị aka overwrite ebe nchekwa ma setịpụ aka na aka ma debe ya na 1800. Nke abuo, nokpuru Nhọrọ - Mmasị - Bandwit, setịpụ ọnụọgụ kachasị nke ndị ọgbọ ejikọtara na mmiri niile ruo 500.
Force ịmalite iyi: Iji mee ka nbudata ahụ dị ngwa, pịa aka nri na faịlụ iyi wee họrọ Force Start. Right pịa iyi ọzọ ma tọọ ọrụ Bandwidth ka ọ dị elu.
Nha faịlụ: 2.29 MB
Mmepụta: BitTorrent Inc.